200-125 300-115 200-105 200-310 640-911 300-075 300-320 300-360 642-998 QV_DEVELOPER_01 400-101 700-501 117-201 70-696 700-505 600-199 400-351 300-207 TE0-141 100-105 300-101 300-206 300-070 70-417 210-260 210-060 200-355 300-208 CISSP 300-135 210-065 300-209 70-243 70-480 CCA-500 2V0-621D 210-451 400-051 E05-001 1Z0-052 70-410 640-916 VMCE_V9 810-403 070-464 070-243 700-802 70-246 FCBA GPHR DEV-401 C2090-610 SY0-401 712-50 ADM-201 700-039 312-50 MA0-101 648-244 SK0-004 ASF 70-494 70-673 500-005 1Z0-060 C9560-503 640-875 N10-006 98-367 70-534 NS0-505 70-342 CHFP 070-410 640-878 1V0-603 1Z0-804 C8010-250 312-50V9 C2150-508 98-368 CLOUDF 70-411 70-461 220-901 70-488 070-341 PK0-003 E20-547 70-412 70-686 500-285 CISM 101-400 102-400 PDM_2002001060 JN0-100 642-883 CAP 070-347 Cashar muhiim ah ayaa Somalia ugu jira siyaasada arrimaha dibadd ee Iran | Shabakada Warbaahinta Times
Cashar muhiim ah ayaa Somalia ugu jira siyaasada arrimaha dibadd ee Iran
Dalka Iiraan waa waddanka kaliya ee ku yaal bariga-Dhexe ee madax-bannaani haysto. Madax-bannanidaan kuma imaan si fudud ilaa haddana loogama harin. Sida waddamada kale muslimiinta Iiraan waxaa marki hore loo dhiibay madax maqaar saar ahaa oo reer Galbeedku u talinayeen. 1979ki ayaa daba-dhilifyadii xukunka laga tuuray waxaana talada la wareegay kacaan ay hoggaan u hayeen wadaaddo shiico ah.
Kacaankaas waxaa uu abuuray collaytan dhinacyo badan ah. Ree Galbeedka oo uu diidan xorriyadda, Sunniyiinta oo ka caraysan shiico dowlad yeelatay iyo kooxo badan oo dowlado kale isticmaalayeen ayaa si joogta ah ula collaytamay. Jiho walba waxaa ka jiray cadow: Galbeedka Saddaam oo ujeedkiisu ahaa in la waayo wax Iiraan la yiraahdo, bariga Taalibaan oo qorshaheedu ahaa inay laayaan shiicada Iiraan oo dhan, koonfur-bari gobalka Baluchistan ee Pakistaan oo ah mid waligiis aan nabad arag, dhinaca koonfureedna waxaa ka xigay waddamada Carbeed oo cadaawad fog kala dhaxaysay. Intaas oo dab ku shidnaa Iiraan waa ka bad-baxday. Sidee?
2: Qarixi saraha Maraykanka ee 2001di ka dib, si ay ooga badbaaddo caradi Maraykanka waxay taageertay geeddi-socodoki siyaasadeed ee Ciraaq iyo Afqaanistaan. Sidoo kale waxay hubisay in siyaasadeeda gudaha ahaato mid dagan. Taariikhdu waxay na bartay in dalki fara galiyo dariskiisa ay xasilooni darradu si fudud kusoo gaarto. Tusaale, faragalinti Pakistaan ee Afqaanistaan, tii Hindiya ku samaysay kacdoonki Tamilka ee dalka Siiralaanka, Turkiga tii dhawaan ka raacday fara-galintisi Suuriya iyo midda Sacuudiga ka haysato yeman.
4: Marki ay soo baxday kooxda waalan ee ISIS, Iiraan ma aysan sugin inta uu dabku soo gaarayo. Waxay si dhaqso ah u howl galisay kooxaha afkaarteeda ku shaqeeyo ee ay horay usii diyaarsatay sida Xisbullahi oo laf dhabar u noqotay badbaadidda Bashar Al-asad. Arintaan Iiraan waxay ku kasbatay sumcad waxayna qaddarin weyn ka heshay shacabka bariga dhexe. Hasa ahaatee waxaan la hubin waxaa ka imaan doono kooxaha ay hubaysay ee caqiidada ku dagaalamayo. Taariikhdu waxay na bartay in waddanki koox hubayeeyo ay isaga dib ugu soo laabtaan marki howshii loo hubeeyay soo dhamaato. Sida ay Iiraan ooga badbaaddo kooxaha boqolaalka kun kor u dhaafay ee ay hubaysay waa arin waqtigu sheegi doono innaguna aan sugayno hadii Eebe idmo.
Iiraan waa dal la isku dayay in la curyaamiyo laakiin si fiican u fahmay dabinka loo dhigay. Waxay taqaan marka uu dagaalka iyo hanjabaaddu xal tahay iyo marka wada hadalku iyada anfacayo. Waxay fahamsantahay waxa ay is hayaan inuu yahay Maraykan inta kalana ay yihiin canaasiir uu isagu soo adeegsaday sidaa darteed marnaba ma tusto inay dagaal kula jirto waddamada Maraykanku soo ganay. Badalkeedi waxay ku dadaashaa inay danaheeda gaarto iyadoo iska dhigayso saaxiib xabiib ah. Iiraan waxay muddo dheer ku jirtay mid shabahdo tan innaga na haysato sidaa darteed waxaa muhiim ah inaan cashar ka baranno sida ay ku badbaaday hagardaamooyinki lala doonay danaheedana u gaartay.
Qoraalkaan waxaa asalkiisi lagu qoray halkaan: https://www.quora.com/Which-country-in-the-world-is-considered-to-have-the-best-foreign-policy-Why?ref=fb
Kala soco: https://ibrahim-shire.blogspot.co.uk/.